I-WhatsApp iyeka ukubonisa umxholo wemiyalezo emva kokuhlaziya i-iPhone kwi-iOS 11.4 | Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | Iiselfowuni, Tutorials, WhatsApp
Ukuphehlelelwa ngolwe-Lwesibini wokugqibela we-iOS 11.4 kuhlobo lwayo lokugqibela, kuye kwathetha ukuphela kwezinye zeengxaki ezicaphukisayo esidibana nazo phantse yonke imihla kwi-iPhone yethu nenguqulo yangaphambili, enje inqaku elimnyamaIimpawu ze-aplikeshini ezibekwe kwixesha lakho lokuzonwabisa kwi-springboard okanye ukuphazamiseka ngokubanzi kwencoko kwisicelo semiyalezo.
Kodwa, abanye bayemka kwaye abanye bayeza. Ngesi sihlandlo, sithetha nge-WhatsApp, ukumkanikazi isicelo sokuthumela imiyalezo kwihlabathi liphela kunye nesixhobo esisisiseko sezigidi zabasebenzisi xa kufikwa kunxibelelwano. Emva kohlaziyo kwi-iOS 11.4, baninzi abasebenzisi ababonayo ukuba kanjani Izaziso zeWhatsApp zibonakala zingenanto kwaphela, ngaphandle kokubonisa umthumeli okanye umxholo, okanye ngamanye amaxesha umthumeli kuphela.
Kuyabonakala ukuba, olu hlaziyo okanye ingxelo yohlelo lokusebenza lweWhatsApp (akukaziwa ukuba ngubani unobangela) ichaphazela izaziso zokutyhala, ezo zisivumela ukuba sifumane nasiphi na isaziso nangaliphi na ixesha, nokuba kukwisicelo semiyalezo, umxhasi weposi, umdlalo, okanye usetyenziso. Ukusombulula le ngxaki kufuneka siye kuseto lwe-WhatsApp.
Ngaphakathi Useto lwe-WhatsApp, Cofa kwiZaziso. Okulandelayo kufuneka sisebenzise iswitshi yokujonga kuqala. Olu khetho lusivumela ukuba sibone isicatshulwa esifakiwe kwizaziso. Ukuba olu khetho belusele lusebenzisiwe, kufuneka siye kuseto lwe-iOS.
Ngaphakathi Useto lwe-iOS, Cofa kwiZaziso, ezibekwe kwibhloko yesibini yokhetho. Emva koko, sijonga isicelo se-WhatsApp kwaye ucofe. Emva koko siya kukhetho lokugqibela olukhoyo olubonisa ukujonga kuqala kwaye ukhethe Njalo.
Nokuba yeyiphi na indlela, ngeWhatsApp okanye ngoseto lwe-iOS, siya kuba nakho ukusombulula le ngxaki iqondileyo ukuba ivela esandleni sohlaziyo lwamva nje lwe-iOS, kodwa oko akuthethi ukuba ingxaki ikhona, inokuba kwakhona ube nguWhatsApp, isicelo Umsebenzi wakhe ngamanye amaxesha ushiya unqweneleka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-WhatsApp iyeka ukubonisa umxholo wemiyalezo emva kokuhlaziya i-iPhone kwi-iOS 11.4